I-Google AdWords vs. SEO: Yini engcono?
Impendulo incike kakhulu esimweni sebhizinisi lakho. Ngaphambi kokuhlaziya ukuthi yisiphi isiteshi sokumaketha esingcono kokushayela kwezimoto nokuhamba kwebhizinisi lebhizinisi lakho - i-SEO noma i-Google AdWords, masiqale sichaze imigomo elandelayo. Lokhu kuzokusiza uthole ukuqonda kangcono ukuthi iyiphi indlela ezosebenza kahle ekukhangiseni kwakho.
Uyini umehluko phakathi kwe-Google AdWords ne-SEO?
Ukusebenzisa injini yokusesha kuyindlela yokwenza amasu namaqhinga asetshenziselwa ukwandisa inani lezivakashi kwisayithi. I-SEO yenza ukusetshenziswa kwamasu ahloswe ukulungisa i-algorithm ye-Google ukuze imithombo yomuntu ibe nesimo esiphakeme kwinjini yokusesha. Lezi zindlela zihlanganisa ukusebenzisa amagama angukhiye abalulekile, ukuxhumanisa okuqukethwe kumawebhusayithi athembekile noma amanye amasayithi ahlobene kanye nokusebenzisa izincazelo ezifanele ze-meta.
I-Google AdWords, ngokwayo, isebenzisa ukukhangisa okukhokhelwayo. Ngale ndlela, abanikazi bewebhusayithi kufanele bakhokhe injini yokusesha (kungakhathaliseki ukuthi i-Google, Yahoo noma i-Bing) ukubeka imithombo yabo phezulu kwemiphumela yokusesha ye-Google. Kumele kuqashelwe ukuthi umnikazi wesayithi kufanele akhokhe njalo uma umsebenzisi echofoza kusikhangiso sakhe.
Ake siqhathanise ne-Google AdWords ne-SEO
Sizoqala ngokuqhathaniswa kwamanani. Into enhle nge-SEO yukuthi ingaqala mahhala njengoba kungekho sidingo sokukhokha izinhlelo eziningi ezikusiza ngamasu we-SEO. Into okumele uyenze ukuthi ukwazi ukuthi yiziphi izindlela ze-SEO ezisebenzela kangcono imithombo yakho futhi uzisebenzise.
Kodwa-ke, ngokushesha nje lapho ibhizinisi lakho liqala, kungenzeka ukuthi ukhethe izinsizakalo ze-SEO ezisebenzayo, njenge-Semalt, ukuze uthuthukise amakhasi akho wewebhu ukuze ukwazi ukuhlala emdlalweni bese ushaya umncintiswano. Izinkampani ezisebenza ngokukhethekile endaweni ye-SEO futhi zikwazi ukuthi zisebenza kule ndawo efanayo iminyaka zinganikeza ibhizinisi lakho ukunakwa kanye nemizamo edinga.
i-Google AdWords inehlobo lokuchofoza ngokukodwa kwenkokhelo. Ngalolu hlelo, lowo uyoba nesabelomali esithile azokhokha njalo lapho umsebenzisi echofoza kusikhangiso. Ngakho, abasebenzisi abangaphezulu ongayithola, kuyodingeka ukuthi ukhokhe ngaphezulu. Nakuba kungase kubonakale kuyindleko kuwe ekuqaleni, akusiyo uma uyiqhathanisa nokukhangisa nokukhangisa umagazini.
Inani lababukeli futhi liholele
Uma ubheka ukubuyiswa kokutshalwa kwezimali, kufanele ubheke inombolo ehamba phambili ye-Google AdWords ne-SEO ongayinika. Zombili izindlela zinganikeza inombolo ephawulekayo yababukeli. Inzuzo ye-AdWords, kulokhu, ukuthi ingathola imithwalo eminingi esikhathini esifushane. Kodwa-ke, uma sinamathela esikhathini esizayo, uzobona ukuthi abantu bazokhuphuka kakhulu emiphumeleni yokusesha yemvelo. Incazelo elula yeqiniso ukuthi ukucinga okuphilayo kuyinto abasebenzisi abayifunayo. Ukuzihlanganisa, i-AdWords izokunika ukuhola noma ababukeli ngaso leso sikhathi, kodwa akusiyo esimeme njenge-SEO engakuthola ababukeli abaningi ngaphezu kwesikhathi esiqoqiwe.
Ngejubane, i-AdWords izoba yisinqumo esingcono. Ku-SEO kungathatha isikhathi esithile kubasebenzisi ukubona iwebhusayithi yakho ngokusebenzisa imiphumela yosesho ephilayo. Nge-AdWords noma kunjalo, ungathola imikhombandlela cishe ngaso leso sikhathi ngoba i-Google AdWords ingabhekisela ekuhlaleni kwabantu abakhethiweyo. I-SEO ayifuni ukukhomba abantu. Yisiphi i-SEO ongayenza ukuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho iyadingeka futhi izethameli ezihlosiwe ezifunayo ziyothola.
Yini okufanele ngiyikhethe: i-Google AdWords noma i-SEO?
Njengoba manje uyazi izinzuzo zesiteshi ngasinye sokumaketha, kungaba lula kuwe ukuthi unqume ukuthi ubani ongcono ibhizinisi lakho. Uma uzama ukudala ukuhola ngokushesha, i-AdWords iyoba yinto ekhethekile kuwe. Kodwa-ke, uma ufuna ibhizinisi lakho libe nokukhula okuqhubekayo, kufanele ufake imali ekusebenziseni amasu we-SEO. Qaphela, ukuba neziteshi zombili zokukhangisa zingase zisebenzise uma nje usetha izinkomba zakho zokusebenza eziphambili futhi uqhubeke nokukala impumelelo yesiteshi ngasinye sokumaketha Source .